Isiphi isiphuzo esihle sokukhuthazela? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Iziphuzo zokubekezela - izixazululo ezisebenzayo
Iziphuzo zokubekezela - izixazululo ezisebenzayo
Isiphi isiphuzo esihle sokukhuthazela?
Lapha, i-iziphuzo zemidlalo ezinhle kakhulu:
Okuhamba phambiliKukonke: NOOMA Organic ElectrolytePhuza.
Okuhamba phambiliUshukela Ophansi: I-Nuun Sport ElectrolytePhuzaAmathebulethi.
Okuhamba phambiliI-Carbohydrate Ephakeme: I-Gatorade Quirst Quirst.
Okuhamba phambiliI-Powder: I-Ultima Replenisher Electrolyte Hydration Powder.
Okuhamba phambilingeCaffeine: INuun Sport + Caffeine.
♪ Bob noBrad two two Physiotherapists famous abadume kakhulu ♪♪ ku-Inthanethi ♪ - Sanibonani bantu, nginguBob Schrupp, uPhysiotherapist - uBrad Heineck, uPhysotherapist - Lapha singabaPhysiotherapists abadume kakhulu kwi-Intanethi - Ngokombono wethu, kunjalo, Bob - Shocking! Lokho Wonke Umuntu Okudingeka Akwazi Ngamanzi Neziphuzo Zemidlalo Ezithandwayo. Ngikubonile uhlehla kancane, Brad. - Yebo. - Ngakho-ke sinezindaba lapha zokuthi anginandaba noma ngabe ungumuntu ojwayelekile, kumele ukwazi lokho okuphuzayo nokuthi kungani kwesinye isikhathi udinga ukwengezwa okuncane esiphuzweni sakho usebenze isigamu semarathon noma yini - fana - sidlula eziphuzweni ezithandwayo zezemidlalo neziphuzo ezijwayelekile odinga ukwazi ngazo eminye imininingwane mayelana nokukugcina uqhubeka. - Uqinisile, Bob.
Sinikeza izindatshana zokuthi ungahlala kanjani uphilile, ulungile futhi ungenazinhlungu, futhi silayisha nsuku zonke sifuna ukusivakashela eziteshini zethu zemithombo yezokuxhumana nakuwebhusayithi yethu - yebo - bobandbrad.com, ngoba sihlala sinikeza okuthile.
Sizokwenza, namuhla akukho lutho, kodwa kusukela kusasa, uma uku ngoMgqibelo, khona manje. Uma ubheka lokhu ngemuva koMgqibelo, lapho-ke kufanele ulunge, kufanele kube khona okunikezwayo. Kunoma ikuphi, vele uye ku-bobandbrad .com bese uya esigabeni sokunikela, esizokutshela ukuthi yini esikunikezayo. - Ngiyacela, ngicela. - Sipha ukuphakama kwedeski, kupholile impela. - Oh, ngesikhungo sokusebenzela sekhompyutha. - Yebo, ugesi, ugesi, upholile ngempela. - Yebo, kuhle. - Ngaphandle kwalokho iya kuBobandBrad ku-Facebook.
Kuphinwe phezulu ekhasini. Ufuna uhlobo olufushane kithi, uma ukhathele ukuthi sikhulume, yiya ku-Twitter naku-Instagram uye kuBob. - Ngine-version yesibili engama-60 yethu - Umsebenzi omuhle Bob, ngiphinde ngome kakhulu, uBob - Kulungile, ungaphuma manje, amakati nezinja zithululela phansi. - Yebo, hhayi ukudlala.
Noma kunjalo, Bob, cishe isonto eledlule sisanda kufaka i-athikili yalokho okufanele ukuphuze. Ingabe amanzi into enhle ongayiphuza lapho usebenza futhi ujuluka, uzivocavoca umzimba, ugijima, noma yini. - Impela. - Ngakho-ke ngicabange ukuthi ngizokwenza ucwaningo, ngikwenzile, futhi kwehlela kulo, into ebaluleke kakhulu ukuthi, uma umsebenzi wakho uphezulu kangaka, ingabe uyajuluka, kufanele ube nawo? I-Sodium - Udinga ukugcwalisa i-sodium. - Kwesokudla, kwesokudla.
Ngakho-ke, amanzi uqobo mahle, kepha ukuba ne-sodium kuyasiza, kanye namanye ama-electrolyte kubalulekile futhi, kepha i-sodium iyinombolo eyodwa - futhi ngingaba yinhloko yayo ngoba uma ngenza, nginguye, ngijuluke kakhulu, ngakho-ke lapho Ngenza umsebenzi omningi, cishe amahora amathathu, - ngiqonde ukuthi ngiyaxaka, ngiqonde ukuthi ngithola okuncane - Awu, uyinqaba noma kunjalo - ngiyaxaka, ngiyaxaka kodwa engeza lokho, ngisho nomuntu ongamazi - Umkakho mhlawumbe akakwazi ukukumela. - Kunjalo, ngakho-ke kufanele ngiphuze okunye kwakho futhi ngizokukhombisa engikuphuzayo - Impela - Futhi kwenza umehluko. - Impela. - Kungenza ngilethe lapha nje? - Yebo, mngenise.
Ngakho-ke sineziphuzo ezithandwa kakhulu ozozibona, ezinye ungahle ungaziboni, futhi sinazo lapha. Sinamanzi lapha, bese sineziphuzo ezingathandwa kangako lapha, iGatorade, sinani, iPowerade, bheka lokhu, i-Bodyarmor, bheka lokhu, kubukeka njengesitsha esihle, bese sinezinye ezeqile engizaziyo asikuphilile ngempela ukuphuza uPepsi noCola - Kulungile, ngiyaxolisa, uPepsi noCola, kodwa kunjalo nje. - Yebo, ngakho-ke ake sikususe lokho kancane, ngoba empeleni sinetafula.
Engikwenzile, Bob, ngenze izibalo ngoba wonke lawa ngamanani ahlukene wevolumu - yebo, kunjalo - ngakho-ke kuyadukisa kancane. Uma ubheka lokhu kusho inani noma amagremu kashukela okukuwo, kepha ushukela owama-ounces ayisishiyagalombili kuphela futhi sinesitsha esingu-28 ounce. - O, impela - ngakho-ke kuyakhohlisa - Yebo ucabanga ukuthi awutholi kanjalo ushukela omningi, kepha sizolithola iqiniso. - Yebo, impela - Sifika emgqeni-nansi ke. - Sifana nabaseshi - Ngakho-ke lapha sineziphuzo.
Sithole i-cola ne-pepsi yethu, uhlobo lwezinto ezingezinhle kangako, futhi sathola isisekelo, amanzi, bese kuba nezinye iziphuzo ezinhlanu lapha - futhi ngokuya ngama-ounces ayi-16 - ama-ounces ayi-16, kahle nje. - Kulungile, impela. - Sinamazinga kashukela, ama-calories, ne-sodium.
Khumbula ukuthi i-sodium ibalulekile, udinga ukuyifaka emzimbeni wakho lapho ujuluka. - Ngakho-ke kuyathandeka ngokwanele, empeleni ungaphuza uPepsiand Cola bese uthatha inani elifanele le-sodium - Mhlawumbe akwanele - Mhlawumbe akwanele - Kepha bheka lokho, i-Bodyarmor ayinayo ne-sodium eningi njengoPepsi noCola, - Yebo, lokho kuyaxaka - lokhu akunjalo, akungeni esigabeni sesiphuzo sezemidlalo. Kuyiqiniso ukuthi iqukethe amanzi kakhukhunathi namanye ama-electrolyte anempilo, kepha futhi, i-sodium ibaluleke kakhulu Ividiyo kusuka esontweni elidlule - Kwesokudla, ngaphambi kwalokho - Yebo, ngakho-ke ake sibheke amazinga kashukela.
UPepsi noCola bacishe bafane, 55, 52, izembatho zomzimba, amagremu angama-36 - ushukela omningi ukuthatha isiphuzo sezemidlalo, noma ake sithi uwusebenzisela nje ukusebenza ngaphandle, ngiqonde, futhi Ufuna ukuthatha Ama-electrolyte, lokho kuthatha ushukela omningi - Awudingi nje ushukela ongako - Awudingi lowo shukela, awudingi nhlobo - Ngakho-ke ngithanda ukubeka iBarmarmarmor esigabeni sePepsi neCola. Ayinakho okuningi kangako, kepha ayinayo i-sodium eningi ngakho-ke ayihambelani kahle nesigaba - ngicabanga ukuthi kufanele sithathe umaki bese sihamba kanjena - Yebo, lo mphakathi ompofu ngeke bawuthande thina. Kuthiwani ngePowerade neGatorade, amazinga abo kashukela aphansi, ngakho-ke kungcono, futhi ama-calories ahlobene njalo noshukela - Impela.
Ngakho-ke angizukuchitha isikhathi esiningi kuyo, kepha ungakubheka lokhu, futhi isodium inkulu kakhulu, njengoba ubona, ama-milligram angama-200, 211, ngakho-ke lokho - kepha lokho akukuhle kangako nami okwamanje - angithi -ngisho ukuthi, kungani uthatha lo shukela lapho 'uzama ukuba nempilo futhi futhi uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini? - Uqinisile - Awuyidingi nje - Ngakho-ke, zilinganiswa kangcono, kodwa kusashukela ngokweqile. - Ngisazothatha i-X ngiyiphambukise. - Kulungile, asikwenze lokho.
Manje kufanele ngisho into eyodwa. - Ngizobamba umaka. - UBob uyajabula lapha - Inkulumo iyaqhubeka. - Ngakho-ke, iPowerade neGatorade banenguqulo engenashukela, uBob. - Kulungile, oh kunjalo .- Kepha kufanele ngikusho lokho ngoba 'Kumele ngikwamukele lokho kuwe - Impela - kodwa angazi ukuthi abantu abaningi bayayiphuza yini.
Ngiwuphuzile, awunambitheki neze. Ishiya ukunambitheka emlonyeni wami. - Ifomu lokudla? - Yebo, noma yini - uPep, ongenashukela, lelo fomu - Yebo, iGatorade engenashukela yilokho enganginakho, lokho kwakungekubi. - Ngakho-ke sikutholile lokho, sihlukanise okukodwa, nakanjani sikuphumezile lokhu.
Lezo izimpawu zemibuzo ezengeziwe, akunjalo? - Yebo. - Kepha mhlawumbe usazikhipha, ngiqonde ukuthi yilezi, - Yebo, uma sifuna okungcono kakhulu, sizobakhipha - Kulungile - Manje ake siye kokungajwayelekile kakhulu futhi lokhu okukodwa, kuyafika ephaketheni.
Kufanele uwuxube namanzi, iphakethe elincane lapha, futhi libizwa nge-Liquid IV, lihle kakhulu --- asikhuthazi noma yikuphi kwalokhu. Ngiqonde ukuthi, asinazo izivumelwano nanoma iyiphi yalezi zinkampani - cha - azikho nhlobo - noma yini, vele siyikhiphe - ngakho-ke iLiquid IV inamagremu ayi-11 kashukela, okungcono kakhulu kunamanye amaKhalori angama-50 angcono, futhi uma ubheka isodiyamu kumamiligram ayi-500, idlula konke okunye. - Ngakho-ke uma ubheka i-sodium yakho futhi ufuna okuthile kodwa ungafuni okuningi, mhlawumbe i-Liquid IV ibizoba ukuthi 'Is not for you - Ingase ibe ngokweqile - Yebo, mhlawumbe ngokweqile. - Uma Awunankinga nalokho Uma une-sodium futhi udlala imidlalo enolaka, lokho kungaba ngcono kuwe, yize sizobona kungekudala, kunjalo, - Yebo - Futhi lokho kuba yilokho okusebenzela wena, akunjalo? - Yebo, ngikusebenzise lokho futhi lokho kuncoma udokotela wami - futhi kuza esitsheni esincane esihle njengaleso - iziqukathi ezincane ngivele ngithathe ithebhulethi futhi engikwenzayo ngivele ngikufake ebhodleleni lamanzi elijwayelekile bese ngikubeka phakathi lapho namabhamuza akhe bese ancibilika- Futhi ancibilike.- Yebo, awudli nje ithebhulethi? - Ukwenze lokho ngolunye usuku, ngikubonile lokho - Kuhle, kumnandi kubamuza emlonyeni wakho. - Yebo, kugcwele emlonyeni wakho - - Yile ndlela abenza ngayo uswidi. - Ngiyayithanda inambitheka futhi ngizoyivuma lapho igalofu liyajika ngoba ngihambahamba igalofu futhi kubukeka kunginika umfutho omncane, mhlawumbe konke kungokwengqondo. - Kwazi bani. - Yebo, kepha ngiqonde ukuthi, ubheka lokho, igremu likashukela, - Ngakwesokudla - ama-calories ayi-15 kuphela, futhi lokho kungusawoti obonakalayo ngokwanele kimi - Kwesokudla, ama-milligram angama-360 - Futhi ama-electrolyte nokunye okunjalo kimi, leyo impendulo, futhi siqhathanisa konke namanzi, okuyinto amanzi enhle, kepha amanzi awakuniki ama-electrolyte futhi awakuniki usawoti. - Kulungile, ngakho-ke uma ujuluka kakhulu, amanzi nakanjani into enhle ongayiphuza, kodwa uthatha isinyathelo esilandelayo - futhi leyo inkinga, ngimane ngiphuza amanzi bese ekugeza, igeza ama-electrolyte akho ungayitholi ngokwanele bese ngokuzumayo u - unesiyezi noma udizizi - yebo, yimi lowo. - Futhi bengifuna ukwenza iphuzu elilodwa lapha ngoba ngithathe isikhathi ukuthola ukuthi ushukela ongakanani kulelo bhodlela le-Bodyarmor. - Kusuka ku-Bodyarmor.- Futhi yilokho-ke, amagremu angama-72 - Bheka lokho, ushukela omningi - Yebo, ngakho-ke ungathatha amanzi nje, uthathe ushukela, udle ushukela, uwuhlanze - usawoti omncane kuyo - Yebo, lapho-ke bekuzofana, kepha kushibhe. - Yebo, i-Bodyarmor ngeke isithande. - Ngeke zisithande. - Kepha qagela ukuthi yini, lokho kulungile ngoba silapha wena - Lokho kulungile - asizile ukuzothola umkhiqizo.- Ngakho-ke qhubeka, manje ukhulisiwe, bheka ukuthi uphuzani, manje uyazi ukuthi yini okudingeka ukwazi, futhi laba ababili laba balapha ngezansi, ngicabanga Ngizokhetha okukodwa kwalokhu, ikakhulukazi izolo, ezinsukwini ezimbili ezedlule, bengikade ngihamba ngebhayisikili lami futhi belishisa futhi linomswakama.
Umswakama wawuphezulu kakhulu futhi ngangiwubona. Kuvele kwangiphephetha. - Impela, yebo. - Futhi ngiphuze amanzi kuphela, bengingenalutho lokuxuba. - Yebo, ngithanda ukubona ukuthi ungcono yini ngaphandle kwawo, ngithola izimpawu, kodwa ngizwa kangcono uma ngikwenza kufane nokudla uma ngikhona angikho nje umcabango wami - kuhle ngicabanga ukuthi abantu abaqhuba imicimbi ebucayi yamabanga amade bangakufakazela lokho - Yebo. - Lokhu, uyazi, njengo-Ironman, imvamisa, lezi zinto ezithatha amahora ukuphothula.- Yebo, uma wenza i-Ironman, shiya imibono yakho ngezansi.
Ngingathanda ukuzwa ukuthi uthini.- IWisconsin Ironman izoba kulo Mgqibelo. - O, kunjalo ngempela? - Yebo, umcimbi omkhulu, kunabantu abangu-2 000 abazobe benza lokhu --- Kwenziwa kuphi? - Madison, Wisconsin, angishongo lokho? - Cha, ushilo uWisconsin - O, Wisconsin, yebo Madison - Kulungile, sibonga wonke umuntu ngokubuka - Funda uRambo ngendlela eyahlukile.
ukubuyekeza kwe-pivot trail 429
Iziphi iziphuzo ezandisa ukukhuthazela?
Ijusi le-beetroot: Ukudla ingilazi yejusi le-beetroot ngaphambi kokuzivocavoca kuzokwenza umzimba wakho usebenze amahora amaningi ngaphandle kokuzizwa ukhathele. IBeetroot icebile ku-vitamin A no-C womabili ayasizaukuqina kwesakhiwonokunciphisa ukukhathala.
Ngakho-ke untula amandla, uzizwa ukhathele ngiyayithola, kepha izindaba ezinhle zikule ndatshana yaleli sonto engizokufundisa ngayo ukuthi ungaligcina kanjani lelo zinga lamandla ngakho ake siqale ngezinto zokuphila emhlabeni wanamuhla wama-24/7 lapho sithambekele khona ukuminyana empilweni yethu asijwayele ukuhlupheka ngoba siqala ukukhohlwa ukuzinakekela. Manje, ngaphambi kokuba siqale ukubheka izeluleko, ngifuna ukuthi ucabange ngale mibuzo embalwa, ngakho-ke kuyini ukudla kwakho, kunempilo yini? Ingabe udla izithelo eziningi, udla imifino eminingi, ulale kahle, udla ngesikhathi, uphuza kakhulu utshwala, uphuza i-caffeine eningi, uphuza iziphuzo eziningi zamandla ngakho-ke ngicela ucabange ngakho njengoba sihamba amathiphu wendlela yokuphila ithiphu eyodwa, okungenzeka ukuthi ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuthi kufanele uqiniseke ukuthi udla ukudla okunempilo futhi okunomsoco ngoba lokhu kuyisisekelo samandla akho, ngakho-ke kufanele udle okusanhlamvu okuphelele, udinga ukudla amaprotheni, Udinga izithelo, udinga imifino, kepha akulula kangako ukukuchaza kule ndatshana emfushane. Ngenhlanhla, i-NHS inombhalo omuhle impela wokuthi ungaba kanjani nokudla okunempilo, okunempilo, futhi ngizoshiya isixhumanisi encazelweni engezansi engingancoma ukuthi noma ngubani ayifunde ukuze aqiniseke ukuthi wenza konke kahle Ithiphu yendlela yokuphila engu-2. kanti, ngicabanga ukuthi lokhu kudla kuphansi kancane kepha kunesizathu sako futhi uma kusebenza kuzobukeka kupholile ku-e njalo uma ukwenze kufanele kusize amazinga wakho wamandla futhi ungaphuthelwa ibhulakufesi njengoba ngokusobala kungokwesithathu kwethu lokhu kungokwesithathu, uyakuphuthelwa futhi lokho ngeke kukusize ukugcina amazinga kagesi ngakho-ke yidla kathathu ngosuku ngezikhathi ezithile futhi noma nini lapho ulambile phakathi nasesimweni sokudla okuncane, izithelo ezinempilo Indlela Yokuphila Ithiphu Yesithathu Yidla ukudla okunothe ngensimbi ngoba amazinga wakho wensimbi aphansi, ungazizwa ukhathele futhi uphelile amandla.
Lokhu kubaluleke kakhulu manje ngentsha namantombazane ngoba usengozini enkulu yokulahlekelwa yinsimbi egazini lakho lokuya esikhathini ngesikhathi sakho, ake sihlale esitofini sengxenye elandelayo. Izindaba ezimnandi ukuthi kunokudla okuningi okunensimbi enkulu, ngokwesibonelo inyama ebomvu, imifino eluhlaza ebomvu, nokudla okuqinisiwe njengamabele. Ngizokushiyela uhlu olugcwele kule ncazelo engezansi.
Ithiphu Inombolo Yesine Ingabe Uhlala Une-Hydrated? Siphuza izingilazi zamanzi eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili ngosuku futhi, kanti, lokhu kuyisengezo kuziphuzo esizithathayo ekudleni kwethu. Kufanele futhi ubuke ukuphuza kwakho utshwala ngoba lokhu kungaholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni nakwe-caffeine futhi futhi kuzokunika lawo mandla, kepha ngokuhamba kwesikhathi uzokwakha ukubekezelelana futhi uzodinga i-caffeine eyengeziwe ukuze uzigcine usezingeni elifanayo lamandla futhi uma awutholi ukuthi uzozizwa ukhathele ngokwengeziwe futhi sicela ukhumbule ukuthi kokubili utshwala ne-caffeine kuzothinta izinga lokulala kwakho ngakho-ke le thiphu yenombolo yesihlanu yokuphila izokwenza uzizwe ukhathele kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke yehlisa ushukela ngokujwayelekile manje siyazi ukuthi abantu base-UK abadala nezingane badla kakhulu futhi badla ushukela ngendlela engaphezulu ngiyazi ukuthi uzokhahlela ushukela ukuqala kulowo mandla aphezulu.
Sizophela ushukela ngokushesha siwushiye ukhathele futhi umanziwe. Manje mhlawumbe ungakuyisa kuwe, kepha Abraham, yini okulandelayo ukuthi nginciphisa kanjani ushukela emhlabeni kulula ukusho kunokukwenza futhi uqinisile ushukela cishe konke okukuzithelo kusemifino kodwa lokho kusezithelweni nasemifino kulungile ukuba nazo kepha ukuthi unganciphisa kanjani ushukela kuyinkimbinkimbi kakhulu kepha ngenhlanhla i-NHS inendatshana enhle impela ngokudla okunoshukela omningi nokuthi ungakusika kanjani, ngakho-ke engikwenzayo ngizokushiyela isixhumanisi sencazelo ngezansi futhi ngiyaqinisekisa uma ufunda lokhu uzoba yilokhu engizoba yishukela, kulungile-ke saqhubeka nokudla kepha manje ake sibheke ezinye izihloko. Imibuzo embalwa ejwayelekile engiyibuza iziguli zami yile: Uyazivocavoca umzimba? Ingabe uyalala emini futhi uphuze noma imuphi umuthi noma umuthi wamakhambi ngoba eminye yawo ingadala ukukhathala, imizwa yakho, izothuthukisa izinga lokulala kwakho, izokhuphula izinga lamandla akho, izonciphisa ubungozi bezifo ezithile ezifana isifo senhliziyo, isifo sikashukela nokunye okuningi kunakho konke ayinayo imiphumela emibi futhi imahhala ngokuphelele manje leli philisi alikho ngeshwa kodwa ngicabanga ukuthi ukube belikwenza konke emhlabeni belizolithatha kubandakanya nami. kahle bangani igama laleli Philisi lomlingo ukuzivocavoca futhi ngiyesaba ukuthi akulula kangako ukuthatha iphilisi engizokunika lona ukuze ngikwazi ukuthatha iphilisi lomlingo kodwa uma ulilingana nawe uzothola zonke izinzuzo engizitholayo Okushiwo futhi konke kufakazelwe, ngakho-ke sicela uzame ukukufaka enkambisweni yakho yansuku zonke bese uthola izinzuzo.
Ngizoshiya neminye imininingwane encazelweni, ngicela ukhumbule ukuthi akukho kudla okukodwa, kufaka phakathi ama-superfoods anelebula, angakhokhela ukudla okungenampilo. Futhi, abukho ubufakazi bokuthi ukudla okukodwa kungakhuphula amazinga akho wamandla, abantu abaningi abadingi isithasiselo sevithamini ukukhulisa amazinga abo wamandla, futhi konke lokhu kungatholakala ngokudla okunempilo, okunomsoco. Manje kunezizathu zezokwelapha nazo ezingadala ukukhathala futhi kunconywa ukuthi ukhulume nodokotela wakho ngakho ngizoshiya uhlu oluphelele encazelweni engezansi futhi ngincoma noma ngubani oyifundayo Khumbula njalo ukuthi umuhle.
Ngiyethemba ukuthi amathiphu ami asebenzile futhi ngizokubona ngesonto elizayo. Lobu ubuciko bangempela bokwenza obenzeka manje. Ngiyethemba nonke niyakwazisa ngoba ngicabanga ukuthi ngingene entweni yami yokulingisa lapha nginezipilisi ezinjenge-movie enkulu engenamkhawulo ngendlela uBradley Cooper amthanda ngayo umfana uBradley Cooper uma ubuka lo mbhalo ngakho-ke ngingumlandeli omkhulu wezinto zabalandeli kanye nokudla okunezivikelo eziqinile ukuqinisa indlela yokuphila ithiphu inombolo yesihlanu manje sesiyazi bafana siyabonga ngokubuka udaba lwaleli sonto
Yisiphi isiphuzo esihle kakhulu sabagijimi?
The VeryOkuhamba phambiliIziphuzo zeAbagijimi
Itiye noma Ikhofi. Ngaphandle kokunikeza i-caffeine jolt ekhulisa ukusebenza, zombiliiziphuzobacebile ngama-antioxidants.
Amanzi noma EzemidlaloPhuza.
I-Chocolate Milkor Wine (noma Ubhiya)!
Ijusi leTart Cherry noma Ijusi Beet.
Amanzi kakhukhunathi noma iMaple Water.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi ungaphindisela ngenkathi uzivocavoca. Ngicabanga ukuthi le yiTurkey. Kunamavithamini amaningi nezithako zokudla emakethe ezithembisa lonke uhla lwezinzuzo zezempilo, kepha yiziphi ezisebenza kahle.
Ngifuna ukuxoxa ngale ncazelo, kepha asisho ukuthi singochwepheshe bezokwelapha, uma ucabanga ukuthatha isengezo noma uzibuza ukuthi uzothatha malini sicela uxhumane nodokotela wakho noma omunye uchwepheshe wezokwelapha futhi unake Qiniseka ukuthi ufuna umkhiqizo onokwethenjelwa noma umthombo wokuthenga isisombululo se-vitamin C kusukela ngawo-1970, kepha ingabe iyasebenza ngempela? Ucwaningo luxubene kancane nolunye ucwaningo oluphakamisa ukuthi empeleni kunomthelela omncane noma awunamthelela ezintweni ezinjengokuvimbela amakhaza, kepha muva nje iqembu lodokotela bezemidlalo abanolwazi nabasebenza ngokudla okunomsoco abasebenza nabasubathi bama-Olimpiki ngezikhathi ezahlukahlukene Ukuzivocavoca kuphakamisa ukuthatha ama-milligram angu-500 kavithamini C nsuku zonke futhi ukhuphule lelo thosi lifike kumamiligram ayizinkulungwane uma uba nezimpawu zento efana neCovid 19. Kukhonjisiwe ukuthi kusiza ekwelapheni nasekuvimbeleni izinto ezifana nenyumoniya, futhi kungasiza futhi ekunqandeni imikhuhlane ngaphansi kwezimo ezinzima zokuxineka emzimbeni, ngakho-ke izifundo sibheke abagijimi be-marathon nabashushuluza ngemithombo kavithamini C ezintweni ezinjengamawolintshi e-broccoli U-Vitamin D kungenye ibhekwa ebalulekile okufanele ibhekwe njengoba isikhumba sethu sikhiqiza ngokwemvelo lapho sikhanyiswa yilanga, kepha phakathi nezinyanga zasebusika lapho kutholakala ilanga elincane, abanye abantu manje ukwehluleka Ukuthi i-Vitamin D Imiphumela ye-Vitamin D inciphisa izifo eziphezulu zokuphefumula futhi yehlise nengozi yokubamba umkhuhlane.
Ngakho-ke, kufanele nakanjani ucabangele ukwengeza ngevithamini D3 kavithamini owathengisayo. Iqinisekisa impilo enhle yamathambo ngokulawula inani le-calcium ne-phosphate emzimbeni. Iphinde igcine ukusebenza kwemisipha yamathambo ngokulawula ukuvuvukala futhi amasosha omzimba asiza ngempilo yenhliziyo njenganoma yini enye Ososayensi be-NHS bathole ukuthi i-zinc ingavimba igciwane elibandayo ukuba lande futhi lisike isikhathi somkhuhlane ngosuku olulodwa noma ezimbili njengoba izakhiwo ezilwa nokuvuvukala ezingasiza ukunciphisa ukuvuvukala futhi zithinte ukuphendula komzimba wakho, iqembu elifanayo lodokotela bemithi yezemidlalo Ukuthatha ama-lozenges e-zinc ngezikhathi zokugula njengomkhuhlane ovamile noma umkhuhlane, kanye nokufinyelela unyaka wonke ku-zinc, ncoma ukudla kwakho ngemuva izinto ezifana nenyama, inhlanzi, amantshontsho, ubhontshisi obhakiwe kanye nezinhlamvu zokusanhlamvu, neminye imithombo eminingi yama-probiotic kungasiza ekwehliseni amathuba okutheleleka ngokuphefumula Izimpawu zihlala isikhathi esingakanani nokuthi zizothinteka kangakanani impilo yamathumbu ibalulekile ekulawuleni ukuzijwayeza ukuvivinya umzimba nokuvivinya umzimba Ucwaningo oluvela e-University College London lukhombisile ukuthi ama-probiotic oketshezi asinda esiswini se-actuall kangcono kakhulu kunasehlobo lwe-capsule Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukwengezwa kwama-probiotic kuqala kangcono cishe emavikini amabili ngemuva kokuqala umjikelezo omkhulu wokuzivocavoca noma ukuncintisana, kanti ucwaningo lukhombisile nokuthi ama-probiotic ayasiza ekwandiseni amasosha omzimba Uhlelo oluphambi kwakho konke ukuhamba kwamazwe omhlaba I-Omega-3 iyinhlanganisela etholakala ezinhlanzini, amanye amafutha, imifino eluhlaza kanye namantongomane.
Ucwaningo ku-2018 lubonise ukuthi ukwengezwa kwe-omega-3 kungaba nomthelela omuhle ekusebenzeni kokukhuthazela. Ukubuyiselwa esimweni sokuqeqeshwa okulimaza imisipha okuyisisekelo, i-Omega 3, ne-DHA ne-EPA ikakhulukazi, kuyizinto ezisemqoka ekusebenzeni komzimba okunempilo. Uma umzimba wakho ungenazo lezi zindawo, ikakhulukazi uma ukudla kwakho kuyizinhlanzi ezinamafutha aphansi, kufanelekile ukucabangela isengezo.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi umzimba wakho unamaphesenti angama-10 kuya kwangu-20 ngaphezulu kwe-magnesium ngesikhathi sokuzivocavoca kunokuphumula, kuya nge-Activity Science manje kukhombisa ukuthi i-magnesium deficiency supplementation ingasiza ukuthuthukisa ukusebenza kwakho kwezemidlalo. Kodwa-ke, uma usuvele uthola i-magnesium eyanele ngokudla kwakho, njengezithasiselo eziningi esikhuluma ngazo namuhla, imiphumela yokwengeza okungeziwe ayivunyelwe, i-magnesium ingumbiwa wesine ogcwele kakhulu emzimbeni womuntu futhi ingasiza ukukhulisa ukusebenza ngokuzivocavoca umzimba ngokusiza gudluzela ushukela wegazi emisipheni yakho bese ususa i-lactate, engakha ngesikhathi sokuzivocavoca futhi ibangele ukukhathala, thola umshanelo wami ekudleni okufana nemifino eluhlaza enamaqabunga njengesipinashi, kanye nembewu, amantongomane nezinhlamvu ezigcwele, futhi izithako eziluhlaza zimboza lonke uhla lweMikhiqizo, kepha kukhulu esikukhuluma ngakho lapha imifino eyimpuphu ehloselwe ukugcwalisa ukudla okungenzeka kungenzeki kwimifino ethile kanye nalokho okuthiwa ama-superfoods izithako ezivamile kufaka phakathi i-chlorophyll, equkethe i-chlorella selenium, ehlobene nokusebenza kwengqondo kuxhumene nomsebenzi we-mun ne-cardiovascular, kanye ne-spirulina algae ebhekwa njengenye ye-nutritiou Ukudla emhlabeni ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ukuthola kumphakeli onedumela futhi akuqukethe okugcwalisa okungadingekile njengathi okwethu Njengoba sishilo ngendatshana eyedlule mayelana nabathuthukisi bezomthetho, kunezifundo ezimbalwa zesayensi ezibonisa ukuthi I-caffeine iyisithuthukisi sokusebenza esihle kakhulu, ikakhulukazi kubasubathi abakhuthazelayo, abangakhuphula ukusebenza ngama-milligram ambalwa we-caffeine ngekhilogremu yesisindo somzimba, kodwa qaphela ukuthi unani ngoba i-caffeine ngokuyisisekelo iyasivuselela ngakho-ke kuthinta impilo yakho noma ube nemiphumela emibi, ikakhulukazi kungathinta ukulala kwakho, esaziyo ukuthi sinempilo ekahle futhi kungaba nomthelela omkhulu uma S Uma ungeyena umuntu ophuza ikhofi njalo, ukubuyekeza okusha okusanda kushicilelwa izincwadi eziku-curcumin ezitholwe ku-turmeric enezinongo zithole ukuthi kunobufakazi obuqand 'ikhanda bokuphakamisa ukuthi kunezinzuzo kubasubathi abazisebenzisayo. Abaphenyi ngemuva kokubuyekezwa babheka inqwaba yomehluko ezifundweni eziqashisayo futhi bathola ukuthi ukusebenzisa i-curcumin kunciphise ukuqonda kobuhlungu bemisipha ngesikhathi sokuzivocavoca, ukunciphisa ukulimala kwemisipha nokukhathala, kanye nezitolo ezandayo zemisipha ye-glycogen.
Baphakamise ukuthatha i-curcumin ngaphambi nangaphezulu kwamahora angama-72 ngemuva kokuzivocavoca kwakho. Manje usungayithola kuzithasiselo ze-turmeric kanye netiye le-turmeric. Yenza lokhu enkomishini yakho oyithandayo ngoba imibala kusuka kokuhlangenwe nakho kwakho.
ILissa alanine iyi-amino acid engabalulekile ehlangana ne-histidine emzimbeni ukukhiqiza i-carnosine, ebese igcinwa emisipheni. Umbono uthi uKarna c bese esebenza njenge-buffer ye-lactate ekhiqizwe ngesikhathi sokuzivocavoca okukhulu, okunganciphisa ukukhathala, ulwazi olusetshenziswe futhi ngabasubathi bama-Olimpiki ku-track yebanga eliphakathi, i-beta aanin isebenza kahle kakhulu emfushane , ukuzivocavoca okunzima, okunamandla kakhulu okuthatha imizuzu esikhundleni samahora. Ingatholakala ezintweni ezifana nenyama, izinkukhu, nenhlanzi, kepha kukhona nezifundo ezithi zingadala ukuzwa okuncane esikhumbeni kuye ngomthamo, ososayensi abaningana babheke nenhlanganisela ye-bicarbonate noma i-soda. ukwesekwa, okulindeleke ukuthi kunciphise imisipha ye-asidi kungasiza ekujikelezeni kwegazi phakathi kwezinye izinto futhi ungathenga ujusi webhitrudi ngokuthwebula okugxile, yize kuyinto enambitheka etholakalayo, ngokwami ​​ngithanda kakhulu ukuthi kunemibono ephikisanayo yokuthi ikuthuthukisa kanjani ukukhuthazela ukusebenza kukhuphukile, kepha ucwaningo lubonakale lukhombisa ukuthi kube nomphumela omkhulu kubagijimi abangahloniphekile abathatha isibhamu kabili ezinsukwini ezine kuya kweziyisikhombisa ngaphambi komjaho wakho futhi babathatha cishe amahora amathathu ngaphambi kokuqala kosuku lomncintiswano.
Abasubathi basebenzisa amaprotheni ikakhulukazi ekwakheni nasekulungiseni imisipha, futhi kusiza nokwandisa isitoreji se-carbohydrate ngendlela ye-glycogen. Hhayi kuphela abakhi bomzimba nabaphakamisa izinsimbi lapho lapho abagijimi abangazuza khona kumaprotheni angeziwe njengoba noma yiluphi uhlobo lokuzivocavoca okukhulu noma olude luzodala ukulahleka kwemisipha nokuzivumelanisa, futhi le protein ingasiza kulokhu kulungiswa. Ungacabangi ngokudla ibha yamaprotheni noma amaprotheni Shake aqukethe cishe amagremu angama-20 wamaprotheni emaminithini angama-30 okuqala.
Lapho usuqedile ukuzivocavoca umzimba, akudingeki ukuthi kube ngemuva kokugijima ngakunye, kepha kushiyele ekusebenzeni kwakho okude noma okunamandla kunokushaya amaprotheni ngemuva kokuzivocavoca. Kusobala ukuthi kusizuzisa ukuthola izakhamzimba ezifanele ngokudla okunempilo futhi okunempilo kepha uma kunobunye ubufakazi obukhombisa ukuthi untula kwezinye izindawo? Ngemuva kwalokho isithasiselo singaba ngesakho, yize singesiwona ochwepheshe bezokwelapha uma kunjalo, uma ucabanga ukuzama okuthile, qiniseka ukuthi ukhuluma nodokotela kuqala uma unemibuzo noma uma siphuthelwe okuthile ofunga ukuthi usazise kumazwana angezansi sizokubona esiteshini esisebenzayo ngokuzayo
Uphuza ini umgibeli webhayisikili ngenkathi ugibele?
Bonaisiphuzoamabhodlela ayishumi amanzingesikhathiumjaho
Abagibelikumele baqinisekise ukuthi bahlala benamanzi ngaphambilini,ngesikhathinangemuva komjaho. Uma kungenjaloukuphuzangokwanele bese beqala ukuphelelwa amanzi emzimbeni, amandla abo okugxila nokwenza kahle azohlupheka futhi nesikhathi sabo sokutakula sizohamba kancane.18. 2019.
Okokuqala ohlwini lwethu iphalishi noma i-oatmeal. Lokhu kuyintandokazi eqinile, ikakhulukazi phakathi kwamaprotheni, ngesizathu esihle futhi lokho kungenxa yokuthi ama-oats anenkomba ye-glycemic ephansi kakhulu futhi lokho okushiwo ngokuyisisekelo ukuthi ahlinzeka ngamandla amancane, amancane angahle aqale ngoSuku kulapho angifuni ukuba nama-spikes kashukela alungele ukushayela okude noma eminye imisebenzi enzima futhi akudingeki ukuthi nayo ibe yisicefe, ngingaqhola omisiwe nezithelo ngoshukela omncane onsundu noSimon wethu uqobo URichardson uncike kithi Njengoba sinikezwe iresiphi ephelele cishe yonyaka, unikeze inhlanzi ukudla okuphelele kakhulu kithina abagibeli bamabhayisikili, hhayi kuphela ukuthi iqukethe amaprotheni asezingeni eliphakeme ekwakheni kabusha imisipha yethu noma ukuqeqeshwa kwe-tuck, kepha futhi iqukethe ama-acid abalulekile futhi awenzi vumela igama likususe, lawa ngamafutha amahle adingwa ngumzimba wakho futhi ngaphezu kwalokho uzothola ukushaya okukhulu ngovithamini B kanye ne-selenium uma kwenzeka uzithola usegumbini lokudla kwasekuseni leqembu labagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe ngempilo yakho ukwenza ukutholwa okuhambisana ne-wi th oatmeal yabo engase idliwe lapho noma olunye uhlobo lwamaqanda, kungumthombo omuhle wamaprotheni ukuqala usuku lwakho ngawo, futhi ungangeza ezinye izithako ezinempilo ezinjengotamatisi kanye nezisaloni ezingcono zeTinkoff. UHannah Graham usikhombise ukuthi singayenza kanjani i-omelette ephelele futhi ungabheka le ndatshana ngokuchofoza incazelo engezansi kwayo Iqiniso lokuthi ukuhamba ngebhayisikili kuhambisana ne-Inkoffee kungenzeka kungabi ngengozi ngemuva kokuba yonke i-caffeine eyodwa yabambalwa izamile futhi amakhambi weqiniso futhi kunenala yekhofi eningi, qaphela nje, yize ezinye iziphuzo ezinkulu ongazithenga emakhofini anamuhla ziqukethe amakhalori amaningi esidlweni sonke, ngakho-ke namathela kuzincane, Ikhofi Elinamandla Uma You Don Ukufuna i-Fiercer and Better Performance i-Nitric oxide isiphenduke undab 'uzekwayo kwezemidlalo ngokushesha nje lapho kuvela ukuthi izifundo ezithuthukisa ukusebenza zikhombisile ukuthi zingakhuphula amandla akho futhi zithuthukise ukugeleza kwegazi lakho nomaphi lapho ungathola khona okuhle uma uku us Ungayithola inbeat uma ukhotha i-UK yakho.
Ungayithola ku-Beattroopstrouble. Kufanele udle ithani lalo uma ufuna inzuzo yokusebenza, ngakho-ke ungayithenga ngaphambi kwamabili noma vele uzenzele okuthile njengoba nje senze kule ndatshana lapha, hhayi ngokungafani nekhwalithi yokudoba ngamantongomane bese ubona izibonelo ezinhle zifaka ama-alimondi ama-walnuts imbewu yamathanga nama-pistachio kepha zama ukusebenzisa inguqulo eluhlaza engaphekiwe yomkhiqizo. Ngisho nebhotela le-alimondi noma ibhotela lamantongomane lingasiza uma unikezwa izithasiselo eziningi kakhulu eziphilayo, kodwa zisebenzise kancane lapho uzisebenzisa njengokudla okulula njengoba zinama-calories amaningi.
Okuthrendayo ikakhulukazi e-US njengamanje, la manzi kakhukhunathi aphezulu nge-potassium, aphansi kakhulu ngama-calories, futhi asebenza kangcono kunamanzi ajwayelekile ajwayelekile, okungenzeka manje angabi ukunambitheka kwawo wonke umuntu, kepha siyazi ukuthi kunamaqembu amaningi we-World Tour laphaya abenza ukuqina okukhulu kumaqembu abo ama-butter eqenjini labo bane-ore futhi badle ngesikhathi esifanele ngemuva kwezinhlanga I-Rice iyindlela enhle yokukhuthaza izitolo zokuvuselela amanye amaqembu futhi iyisebenzise ngesikhathi somjaho, ihlanganiswe nenhlanzi noma uhlobo oluthile lwamaqanda, iphelele Ukudla ngemuva komjaho Ukuvivinya imifino yakho ngayinye yinto abaningi bethu abazoyikhumbula ukuthi abazali bethu basitshele siyizingane, ngeshwa, baqinisile, ziqukethe amavithamini nezakhi zomzimba eziningi kakhulu esizidingayo futhi ziwumthombo omuhle wama-carbohydrate imifino Ngokuphikisana nezithelo ezinoshukela, kunzima kakhulu nokudla imifino eminingi kakhulu, kepha okungenani okukodwa kwethu akuthandayo ukudla okungenamsoco, i-flapjack, kulula ukuyidla ngenkathi ushayela, vele ungene ephaketheni lakho uzwe ukunambitheka okuhle ne-p rovide ngqo uphethiloli owudingayo ohambweni lwakho. Ukupheka ngaphandle lapho, kepha kungani kungenjalo ngeyesalmon ehlukahlukene konke ukuqala kwayo?
Ingabe ikhofi ilungele abagijimi?
Ikhafeyinikwandisa amazinga akho egazi wamafutha acid amahhala, okwenza ukuthi atholakale njengophethiloli ngenkathi kugcinwa izitolo zakho ze-glycogen kudeegijima.Ikhofikungasiza futhi ukugcina izitolo ze-glycogen lapho kudliwe ngemuva kokuzikhandla, ngesikhathi sokululama.15 2018.
Yikuphi ukudla okuthuthukisa ukukhuthazela kwenhliziyo?
Uma ufuna ukuziqeqesha isikhathi eside nangaphezulu, zama ukukhuphula ukudla kwakho kwe-carbohydrate. Imithombo ehlukene yama-carbohydrate ifaka i-pasta, ilayisi, isinkwa, nokusanhlamvu; izithelo; nemifino enesitashi njengamazambane.
Ngabe iRed Bull izongenza ngigijime ngokushesha?
Okutholakele ocwaningweni kukhombisa ukuthi kuyadlainkunzi ebomvuihora ngaphambi kokuzivocavocakuyakwenzasiza ukuthuthukisaegijimaukusebenza. Ngokuqondile, okutholakele kukhombisa ukwehla okukhulu ngesikhathi esithatha umgijimi wokuzilibazisa ukuqeda i-5kmgijima.
Ngabe abagibeli beTour de France baphuza utshwala?
Isikhathi eside, kuze kube yi-1960s, kwakuyinto ejwayelekile yeabagibeli be-tour de Franceukufaka i-slug aisiphuzokautshwalangesikhathi somjaho. Hhayi kuphelawenzebonauphuze utshwalaukudambisa izinhlungu kepha bakuthatha njengesikhuthazi sangempela sokusebenza. Njengoba wazi izikhuthazi zivinjelwe futhi bekunjaloutshwalaekugcineni ngoba kuthathwa njengokuvuselela.
Ngabe abagibeli bamabhayisikili bayaphuza?
Nomakufanelewena, ngenxa ye-ukuhamba ngebhayisikili, Imaukuphuzautshwala ngokuphelele? Ekuqaleni konyaka, kwavezwa ukuthi abagibeli nabo bonke abasebenzi beqembu leWorldTour iLotto-Soudal bavinjelweukuphuzangesikhathi samabhulokhi abalulekile wokuqeqeshwa nemijaho (ngaphandle kwamanani amancane alandela ukunqoba noma usuku lokuzalwa).18. 2020.
Ngingayiphuza ikhofi ngaphambi kokugijima?
Ufuna ukuthatha eyakhoi-caffeineshaya cishe imizuzu engama-45ngaphambiuqala yakhogijimaukujima, ngokusho kwalolu cwaningounayoukulinda isikhathi esithile se-ikhofiukushaya ukugeleza kwegazi lakho, kepha uma ulinda isikhathi eside ngemuva kwesikhathiukuphuza i-caffeine ngaphambi kokugijimanoma imiphumela izoqala ukuphela.1. 2021.
Isiphi isiphuzo samandla esihle kakhulu sabadlali abakhuthazelayo?
Abanye abasubathi bafunga ngomkhiqizo owodwa futhi banamathela kuwo, kuyilapho abanye besafuna isiphuzo samandla esifanele esinikeza ama-calories nama-electrolyte anele futhi angabangeli ukucindezeleka kwamathumbu.
Isiphi isiphuzo esihle kakhulu semidlalo se-hydration?
Yenza isiphuzo samandla ezemidlalo eshukela. ICoca Cola ibinomkhiqizo wesiphuzo samandla. I-SFH inikeza inani elikhulu lemikhiqizo ye-hydrating. Ukusetshenziswa okunconyiwe kungaphambi kokuzivocavoca, ngesikhathi noma ngemuva. I-SIS ikhiqiza iziphuzo ezidumile ze-hydration. Iziphuzo zisuselwa ku-maltodextrin ne-fructose.
Ingabe zikhona iziphuzo zemidlalo ezithatha indawo yama-electrolyte?
Iziphuzo zezemidlalo ezivela eSkratch Labs zenzelwe ukufaka ama-electrolyte ngesikhathi sokuzivocavoca. Futhi aqukethe amavithamini kanye ne-dextrose. Ukwakhiwa okuhlanganisiwe ngokwesayensi kwama-carbohydrate, amaprotheni, okunamafutha acid, amavithamini kanye namaminerali ahlanganiswe namanzi.